Kudzokorora kweGoldstar.com Kubhadhara Mathikiti
Nyika dzakabatana California Los Angeles
Goldstar Discount Matikiti
Goldstar.com inonzi discount discount broker for theater, comedy, sports, festivals, tours, spa, musamuziyamu, zvikwereti uye mamwe matikiti kuLos Angeles nedzimwe nzvimbo dzakawanda muguta reUnited States. (HASI hubatanidzwa neGoldstar Matikiti muUnited States.) Los Angeles haina TKTS bhoti yakadai seNew York City yekuwana matikiti ekutengesa hafu yekutaridza, asi Goldstar iri nzira yakanakisisa sezvo iwe unogona kutora matikiti ako ekutsvaga paIndaneti mberi , kusanganisira hurukuro ye Broadway paPatages Theatre kana kuLos Angeles Music Center , makonti paHollywood Bowl , Disney Concert Hall , The Greek Theatre kana The Forum, uye zviitiko zvemitambo mumatambo makuru eMAS .
Kuti atenge matikiti asina kutengesa, vashandisi vanofanira kusayina kuhutano hwepachena nekombiyuta yakakodzera ye-email. Kana ukangopinda kubhadharo yega yega pawww.goldstar.com, iwe unogona kuwana mazita ezviitiko nekutengesa matikiti. Iwe unogona kusarudza kuva nechiitiko chinyorwa uye kunyeverwa kwemashoko kwauri, kana kungoenda paIndaneti uye uzvitarise paunenge uchitsvaka chimwe chinhu chaunofanira kuita.
Iwe unogona kutsvaga zviitiko nezuva, chikwata kana shoko rekushandisa kushandisa Filter box mukati mekhasi. Dzvanya zvose Zviitiko zvinosangana kuti uone zvakasiyana siyana. Zvinosanganisira zvinhu zvakadai semitambo, makwikwi, mimhanzi, kana mitambo, zvikwereti, marwendo, kana makirasi, zororo, zuva rekufunga, kusina, mhuri kana pasi pe $ 10 kutumidza zvishomanana.
Iko kune mari yebasa rekutengesa tiketi, sekufanana nemamwe matikiti. Basa rebhadharo retikiti "risina" rinowanzokwirira kupfuura mamwe matikiti.
Kana ukangotenga matikiti emusangano, vanogona kuendeswa ku digital kana kuti vanogona kutora pa "Will Call," kana dzimwe nguva patafura yakasiyana pane zviitiko zvikuru.
Nezviitiko zvisingawanzoitiki, matikiti anotumirwa kwauri. Matikiti aya anopiwa zvakananga nenzvimbo, kwete neGoldstar. Inotaura pawebsite yekuti iwe unofanirwa kutora matikiti ako zvishoma nemaminitsi gumi nemashanu musati wapera kana kuti vanogona kubudisa zvigaro kune mumwe munhu. Chero bedzi iwe unogona kusvika ipapo nenguva yekuregerera, handigone kuona rutivi rwezasi kushandisa Goldstar muLos Angeles, uye iwe pachako uchishandise nguva yose.
Kana iwe uchigara muRa kana uri kungoshanyira, tarisa Goldstar.com usati wabhadhara mutengo wakakwana wetikiti isina-brainer. Kana iwe uchangobva kuLA kwenguva pfupi, iwe unogona kuinaini kuti uone zvinowanikwa, wozozvinyora mushure mekufamba kwako.
Iko kusununguka kubatana
Anoratidzira zviitiko zvakasiyana-siyana
Makatikiti asina mafiri kune mamwe mimwe miitiko
Imeverayeri maziso anokuzivisa iwe kana zviitiko zvitsva zvikawanikwa
Mutero webasa hausi pasi pevatengesi vakawanda vetiketi
Nyevero kana zviitiko zvitsva zvakawedzerwa
Zvikamu zviduku zvinoita kuti zvive nyore kuwana zvauri kutsvaga
Iwe unofanira kutora matikiti ako zvishoma nemaminitsi gumi nemashanu musati wapera, kana kuti anogona kudzorerwa zvakare.
Kana iwe ukanyora kune zvakawanda zvezvikamu, unogona kuwana yakawanda email
Kurudzirwa zviitiko zvakakurumbira zvinogona kunge zviduku, uye mamwe matikiti ayo ari kutengesa tikiti haatomborwi zvachose.
Basa rebhadharo rinosiyana kune chimwe chiitiko uye dzimwe nguva rakakwirira.
Cherechedza: Kudzokorora kunongotaura chete kuGooglestar website, iyo isina HERE yakabatanidzwa neType Star Tickets mu UK. Kunyanya, kubvunzurudzwa kwakavakirwa pane zvakaitika kuna Goldstar.com muLos Angeles.
Kuenda Kwose Los Angeles
Halloween muLos Angeles 2016
Museums Makasununguka uye Musimusi Mazuva Mashoma Kupfuura Los Angeles
Imba yeViper muLa
Ndepi iyo Santa Monica Pier?
The Palms Golf Club kuMesquite, Nevada
Carnival Breeze Kunze
Zvamunoda Kuziva Nezvepasi Pese Airways 'Kazhinji Flyer Programs
Kushanyira Gwende yeAmrita Kubva Seattle
Five Budget Hostels ku Seattle
Fairy Tale Cottages Under Thatch
Children's Boutique Shopping in Broward uye Palm Beach Counties
Pamusoro Caribbean October Zviitiko
Silversea Cruises - Cruise Line Profile
Restaurants neBari muReno's MidTown District
Skating Montreal's Parc Maisonneuve
7 Zvinotyisa Zvisikwa Zvitsuwa zveLake muUnited States